Maaddaama xayiraadaha safarka Mareykanka ay fududaanayaan, safarada UK waxay kor u kici doonaan 10 milyan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Maaddaama xayiraadaha safarka Mareykanka ay fududaanayaan, safarada UK waxay kor u kici doonaan 10 milyan
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Ra'yi ururin dhowaan la sameeyay, 58% jawaabeyaasha caalamiga ah ayaa shaaca ka qaaday in shuruudaha karantiilku ay yihiin kuwa ugu weyn ee ka hortaagan safarka caalamiga ah, iyada oo 55% kale ay sheegeen inay ka hor istaagi doonaan xayiraadaha safarka.
Booqo socotada saaxiibbada iyo qaraabada (VFR) ee ay u badan tahay inay horseedaan baahida marxaladda soo -kabashada safarka ee degdegga ah.
Socdaalka VFR wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku kordho heerka kobaca sanadlaha ah ee isku dhafan (CAGR) oo ah 24.8% inta u dhaxaysa 2021 iyo 2024.
Duulimaadyada UK iyo Mareykanka ayaa qarka u saaran inay xoojiyaan soo kabashada safarka ee labada dal iyadoo baahida duulimaadyadu ay sii kordheyso.
Ku dhawaaqista in xayiraadaha safarka Mareykanka ee dadka UK ee la tallaalay la dejin doono laga bilaabo horraanta Noofembar waxaa si wanaagsan ula kulmi doona dadka doonaya inay dib ula midoobaan qoyska iyo saaxiibbada. Tirada dadka ka dhoofaya UK si ay u soo booqdaan saaxiibbada iyo qaraabada (VFR) ayaa lagu wadaa inay ka kacdo 10.6 milyan sannadka 2021 illaa 20.5 milyan marka la gaaro 2024 - taasi waa 24.8% CAGR oo cajiib ah. Kani waa war u wanaagsan dalxiiska Mareykanka, kaas oo ka faa'iideysan doona qulqulka dalxiisayaasha UK.
Socdaalka VFR waxay u badan tahay inuu horseedo dalabka mustaqbalka dhow maaddaama xannibaadaha socdaalku ay bilaabayaan inay fududeeyaan oo dalabka daahsoon la furay. Xaqiiqdii, VFR waxaa la filayaa inay ku kordho xawaare ka badan waqtiga firaaqada, taas oo ah wax aan caadi ahayn maadaama firaaqada pre-COVID ay aad uga sarreysay baahida marka loo eego VFR. Diirada saarista dalabka safarka ee VFR waxay u noqon doontaa talaabo caqli gal ah labadaba UK iyo US Shirkadaha Duulimaadyada, iyada oo dadka socotada ah ee UK ay raadinayaan in ay dib ula xiriiraan ehelkooda ka dib bilooyin ay kala maqnaayeen.
Ka -fogaanshaha xagga safarka waxay u badan tahay inuu isbeddelo marka la fududeeyo xannibaadaha safarka iyo shuruudaha karantiilnimada. Laga bilaabo horraantii Noofembar, si buuxda ayaa loo tallaalay UK dadka socotada ah waxay awoodi doonaan inay ka gudbaan shuruudaha karantiilnimada waxayna la kulmi doonaan xaddidaadyo safar oo yar marka ay soo galayaan Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, waxay wali u baahan yihiin inay keenaan caddaynta natiijada imtixaanka taban wax aan ka badnayn saddex maalmood ka hor safarka ama caddaynta ka soo kabashada COVID-19 saddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Nasashadaani waxay si fiican ugu habboon tahay kuwa doonaya inay dibedda ku dhiiradaan. The US ayaa muddo dheer ahayd meel caan ku ah dalxiisayaasha UK iyo falanqaynta warshadaha ayaa muujineysa in US waxay ahayd tii shanaad ee ugu caansanayd caalamada caalamiga ah ee 2019. Iyada oo xayiraadaha la qafiifinayo waxay u badan tahay inay sii dayso dalabka daallan oo ay siiso dakhli aad loogu baahan yahay shirkadaha safarka.
Duulimaadyada tooska ah ayaa sidoo kale door ka ciyaari kara soo saarista dakhli aad loogu baahan yahay iyo kororka inta jeer ee duulimaadka.
UK-diyaaradood oo ku salaysan xoog leh US jadwalka duulimaadka, oo ay ku jiraan British Airways iyo Virgin Atlantic, ayaa soo sheegay kor u kaca baahida duulimaadyada Mareykanka. Duulimaadyada tooska ah waxay u badan tahay inay u safri doonaan dadka socotada ah maaddaama ay u oggolaadaan waayo -aragnimo la malayn karo oo ka ammaan badan intii lagu xiriiri lahaa xarun.